Ziziphi izizathu zokuqesha umqeqeshi we-SEO?
Unyaka ngamnye, iinjongo zokukhangela ezifana ne-Google, iBing okanye i-Yahoo zitshintsha isethi yamaparameters ezobugcisa kunye nokukhangela izilungiso kwiziko lewebhu kwi-SERP. Uninzi lwabanikazi bewebhu abanalo ixesha elaneleyo kunye namava ukubeka iliso lokutshintsha okuqhubekayo kwitekthi yokuthengisa yedijithali. Yingakho benza isigqibo esifanelekileyo sokuqesha umcebisi we-SEO onokuyakhela umkhankaso wokwenza umsebenzi we-web. Ngoko umgca wenkqubo nayiphi na inkqubo yokuphucula isayithi ukuqesha iqela le-SEO elithembekileyo nelinamava. Ukuba usenokungabaza nokuba ufuna ukuqesha umcebisi we-SEO okanye ungenjalo, izizathu ezilandelayo ziza kukunceda wenze ingqondo yakho.
Izizathu eziphambili zokuqesha umqeqeshi we-SEO owaziwayo
Ukuphuculwa kweenjini zophando yinkqubo echitha ixesha elingenakwenziwa kwinto enye - rehvid paernus. Ngokuqhelekileyo, kuthatha kwiiveki ezi-4 ukuya kwezi-6 ukuphucula yonke imiba ye-SEO kwaye emva koko uza kukhangela iziphumo ezilungileyo zokuqala. Ukwenza isicwangciso sokuphucula ukuphumelela, kufuneka uhileleke kule nkqubo ngokuhamba kwesikhathi. Uninzi lwabanini bezoshishino abanalo ixesha elaneleyo lokuzinikela kwiqela le-SEO ngokupheleleyo. Ngenhlanhla, iqumrhu elithembekileyo le-SEO linalo ixesha elaneleyo kunye namava ukunika i-campaign ye-promotion ye-SEO ingqalelo.
Ukuba idilesi yakho sele ikhona ngaphezu konyaka omnye kwaye awuyigcinanga kwinqanaba lokuqala okanye ubuncinci kwiphepha le-SERP yekhasi, kuthetha ukuba kukho into engalunganga ngokucwangcisa indawo yakho. Ukuze kube ngempumelelo, umkhankaso wokuphucula injini kufuneka wenze ngokuchanekileyo. Ungaphoswa ithuba lakho lokuvelisa ezinye iinkalo kwaye ubhekisele kwelinye iqela le-SEO. Baya kukunceda ukulungisa ezinye iipostiki zobugcisa kwaye uphucule isayithi lakho SEO. Qinisekisa ukuba uqeshe uchwepheshe we-SEO oqeqeshiwe kunye nolwazileyo onokukunika iziphumo eziqinisekisiweyo kunye neepotifoliyo kunye neeprojekthi ezenziwe ngempumelelo. Ngaphandle koko, uyingozi ukuchitha imali kunye nexesha.
Kufuneka uqeshe inkampani ye-SEO njengoko beyazi indlela yokwenza isayithi lakho lisebenziseke ngayo. Bakukubonelela nge-niche site design kwaye kulula ukuyisebenzisa ukuhamba. Ngokuphucula isakhiwo sakho sesayithi kunye nombonakalo obonakalayo, uzakuheha abathengi abaninzi kwaye uzenze zibe ngabathengi bokuhlawula.
iGoogle ihlaziya ngokuqhubekayo izilungiso zayo, ngoko ibhishini lakho lifuna iqela leengcali ezibhaptiziweyo kuzo zonke iinguqu zeemarike zedijithali kwaye ziqonde indlela yokudibanisa olu tshintsho kunye nesiza sakho ukuphepha ukulimaza.
Umcebisi we-SEO onolwazi uza kukunceda uhlale phambili. Ngabasebenzisi banamhlanje abanokufikelela kwiinkalo ezibanzi zeemveliso kunye neenkonzo ze-intanethi, ingcali efanelekileyo ye-SEO inokukwenza ukuba isiqiniseko sakho sikhangeleke kwaye sisebenzise umsebenzisi kunokuba ngabadlali bakho beemarike.
Ukuphuculwa kweenjini zophando kuyinkqubo enemali-ntsebenzo njengoko zonke iityalo zakho ziza kuhlawulelwa kwii-spades. Yingakho, ungacingi ngokuqesha umcebisi we-SEO njengendleko, cinga njengenzuzo ekufumaneni umcimbi njengeprogram yokuphucula umgangatho njengoko kukunika amandla okuvelisa iikhotha kwaye i ikhupha i-brand yakho ye-intanethi ubukho.